Melatonin | Mega Planet Co., Ltd
Melatonin also offers strong protection against oxidative stress. Melatonin is especially important for healthy cellular DNA and mitochondria support because it helps inhibit oxidative damage by directly scavenging free radicals.8-10 Melatonin does so more effectively than many other antioxidants. 11, 12
Other ingredients : microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), rice concentrate.
Exp Gerontol. 2001;36(7):1083-10
Neurological Research. 2017;39(6):559-565
Take one (1) capsule 30 to 60 minutes before bedtime, or as recommended byahealthcare practitioner. Melatonin is naturally secreted from the pineal gland at night, and should be taken at night for optimal results
Caution : Consult your healthcare provider before taking this product if you are being treated foramedical condition (especially autoimmune or depressive disorders). Use caution if combining with alcohol. This product is not intended for children, pregnant or lactating women, or women trying to become pregnant. Do not consume alcohol, drive or operate machinery after taking this product.
3mg, 60 vegetarian capsules
Melatonin သည် အိပ်ငိုက်မှု အရှိန်ကို မြင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် အိပ်စက်မှုအရည်အသွေးကို မြင့်မားစေသည် ထို့ပြင်ယင်းတွင် antioxidant property မြင့်မားပြီး cellular DNA ကာကွယ်မှုအတွက် အရေးပါသည်။
ဤဖော်မြူလာတွင် Melatonin 3mg ပါရှိသည်
ကျန်းမာရေးသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ခုခံအားကို ထိန်းညှိပေးသည်
Cellular DNA ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်
Oxidative stress နှင့် free redicals များကို တားဆီးပေးသည်
Melatonin ၏ အခြားအချက်အလက်များ
Melatonin မှာ amino acid tryptophan မှဆင်းသက်လာသည့်ဟိုမုန်းဖြစ်သည်။ Melatonin အား မူလအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဦးနှောက်အ ကြိတ်မှ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ညပိုင်းအချိန်တွင်အများဆုံးထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် လွယ်ကူစွာအိပ်ပျော်စေသည်။ ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် Melatonin တွင် ခိုင်မာသည့် antioxidant properties များရှိ၍ ကျန်းမာသည့် ခုခံအားနှင့် ကျန်းမာသည့်ဦးနှောက်အပြင်အခြားအရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ညဖက်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးတစ်ရပ်လုံးအတွက် အဓိကကျသော်လည်း လူအများစုမှာမူ ကောင်းစွာ အိပ်ပျော်ရန်နှင့် အိပ်စက်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကို ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်။ ကျန်းမာသည့် အိပ်ပျော်မှုပုံစံများသည် သင့်ခန္ဒာကိုယ်နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးသဟဇာတဖြစ်မှု ကို ကြီးကြပ်ပေးပြီး Melatoninသည် သင့်နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးကို ညီညွတ်မျှတစေသည်။ သို့သော်လည်း Melatoninမှ အသက်အရွယ်အလိုက်အားနည်းစေ သည့်ဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည့်အတွက် ကိုယ်လက်ပင်ပန်းခြင်း၊ အလုပ်ချိန်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် အမြင်ပိုင်းကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Melatonin နှင့် Oxidation
Melatoninတွင် ခိုင်မာသည့် oxidation properties ရှိသည့်အတွက် ယင်းသည် hydroxyl and peroxyl free radicals များကို တိုက်ရီုက် ရှင်းလင်းပေးပြီး အခြား antioxidant အားလုံးထက်ထိရောက်မှုရှိသည်။ Melatoninသည် peroxynitrite free radical reactions များကို တားဆီး ပေးသည့် အတွက် ကျန်းမာသည့် cellular DNA အတွက် အထူးအရေးပါသည်။ Melatonin သည် oxidative damage များကို တားဆီးမှုအတွင်း အကူအညီပေးရာ တွင် glutathione-3, vitamin C, vitamin E တို့ထက်ပင်သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
Melatoninသည် ခုခံအားစတနစ်အပေါ်တွင်အကျိုးပြုသည်။ ယင်းသည် ပြင်ပ molecules များကို တုန့်ပြန်ပေးသည့်ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင် ပေးသည့် အခြားခုခံအား cells များကို အစပျိုးပေးခြင်းဖြင့် T-helper cells များကို ရှင်သန်စေသည်။
Melatoninနှင့် သိသာထင်ရှားသည့် ကျန်းမာရေး
အသက်အရွယ်ဆိုင်ရာ ထင်ရှားသည့် ကျဆင်းမှုသည် Melatonin levels များနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Melatonin ဖြည့်စွက်မှုသည် ဦးနှောက် ၏ သာမန်antioxidant ကာကွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ထင်ရှားသည့် အရွယ်ကျမှုများဖြစ်ပွားစေသည့်အကြောင်းရင်းများကို တားမြစ်ပေးပြီး အကောင်းဆုံး အိပ် စက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး သင်၏နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးအတွက် Melatoninဓာတ်ကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
အခြားပါဝင်မှုများ : microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), rice concentrate
နေ့စဉ် အိပ်ယာမဝင်မီ (၃၀-၆၀) မိနစ်အတွင်း ဆေး(၁)တောင့်ကို မှီဝဲရန် (သို့) ဆရာဝန်ညန်ကြားသည့်အတိုင်းမှီဝဲရန်။ Melatonin အားပုံမှန်အား ဖြင့် ညဖက်တွင်ဦးနှောက်အကြိတ်ထဲမှ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းကြောင့် ညဖက်ပိုင်းတွင်မှီဝဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိစေမည်။
သတိပြုရန် : အကယ်၍ သင်မှ (အထူးသဖြင့် ပဋိဓာတ်များဆန့်ကျင်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ (သို့) စိတ်ကျရောဂါ) များကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေသူဖြစ်လျင် ဤဆေးအား မှီဝဲရန်အတွက် ဆရာဝန်(သို့) ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးရမည်။ အကယ်၍ အရက်နှင့်အတူ မှီဝဲလျင် အညွှန်းအား သတိပြုရန်။ ဤဆေးသည် ကလေးငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ(သို့) ကိုယ်ဝန်ဆောင်များဖြစ်လာမည့် အမျိုးသမီးများအတွက် မရည်ညွှန်းပေ။ ဤဆေးသောက်သုံးထားလျင် ကြီးမားသည့်စက်ကိရိယာများကို မောင်းနှင်လည်ပတ်ခြင်းများမပြုလုပ်ရ။